Seoul hatrany Zagreb: Serivisy an'habakabaka voalohany eo anelanelan'i Azia sy Kroasia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seoul hatrany Zagreb: Serivisy an'habakabaka voalohany eo anelanelan'i Azia sy Kroasia
Taorinan'ny sidina Koreana Air an'ny sidina miainga avy any Seoul mankany Zagreb, hanitatra ny tamba-jotra ho any Eropa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny alàlan'ny fanombohana serivisy voalahatra mivantana eo amin'i Seoul, Korea Atsimo ary Zagreb, renivohitr'i Kroasia.
Seoul - Zagreb dia hampiasaina intelo isan-kerinandro manomboka amin'ny septambra 1,2018.
Ity no fifandraisana rivotra mahazatra voalohany eo amin'i Kroasia sy i Azia.
Famerenana vao haingana momba ny Korean Airlines dia nilaza fa: Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka koreana dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny rakitsoratra ara-potoana eto amin'izao tontolo izao. Fiaramanidina tena tsara, mpiasa mailo, seza tsara. Saingy tsy ampy ny serivisy sakafo. Miala tsiny, fa tsy ny olon-drehetra no mankafy sakafo matsiro, na kimchi amin'ny sakafo maraina. Ny sidina dia tsy nanolotra saran-tsakafo tandrefana tokana. Tsara ihany anefa ireo horonana mofo. Esory ny safidin'ny sakafo, dia manana…
Munich mankany Montpellier sy Zaragoza ao Volotea
Miroborobo ny fizahantany sy ny sidina any Qatar herintaona taorian'ny sakana